Dubbii fi Hojii Iimaana Diigan Archives - Page 5 of 6 - Ibsaa Jireenyaa
Category: Dubbii fi Hojii Iimaana Diigan
April 2, 2020 Sammubani Leave a comment
Hanga ammaatti dubbiii fi hojii iimaana diigu ilaalun duratti seensa ilaalaa turreera. Ammas, dubbii iimaana diigan gurguddaa irraa jalqabna. Dubbii iimaana diigan jalatti: Hiika shirkii, gosoota shirkii, tawhiida asmaa wa sifaata keessatti dubbii iimaana diigu, tawhiida uluuhiyyah keessatti dubbii iimaana diigu fi kanneen biroo ni ilaalla. Isin hanga xumuraatti waliin turuuf qophiidhaa? Mata-dureen kuni mata-duree garmalee ijoo akka ta’e hin dagatinaa.
March 31, 2020 Sammubani Leave a comment
Uzrii jechuun sababa ykn rakkoo dhiyeefataniidha. Fkn, mana barnootaa irraa yoo hafte, barsiisan sababa ykn rakkoo kee dhiyeefadhu yoo jedhe, sababni ykn rakkoon dhiyeefattu kuni uzriidha.
March 30, 2020 Sammubani Leave a comment
Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Ergamtoota gammachistootaa fi akeekachistoota gochuun ni erge, ilmaan namaatiif sababoota qajeelinnaa ni godheef. Ogummaa fi haqummaan Isaa guutuu ta’uu irraa kan ka’ee ragaan erga irratti dhaabbatee booda malee eenyullee hin adabu. Akkuma akkana jedhe:
Kutaa darbe keessatti gosoota kufrii keessaa kufrii gurguddaa amanti keessaa nama baasu ilaalle jira. Har’a immoo gosa kufrii xiqqaa amanti keessaa nama hin baasne ilaalla: